IMIPHEZULU YEETAFILE ZEGRANITE EZINAMACHAPHAZA (ISIKHOKELO SOYILO) - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi Imiphezulu yeetafile zeGranite ezinamachaphaza (Isikhokelo soYilo)
Wamkelekile kwisikhokelo sokuyilwa kweetafile zegranite esikhokelwayo kubandakanya ukuba yintoni, ukulunga kunye nokubi, iindleko kunye neendidi ezahlukeneyo onokukhetha kuzo. Umkhwa ovelayo ekhitshini nakwiyilo lokuhlambela, imiphezulu yeetafile yegranite ehlekileyo intle, iyasebenza, kwaye yahlukile. Ngelixa kukho iimfuno ezithile zolondolozo ekufuneka zigcinwe engqondweni, ezi ndawo zokubala zelitye ezizinzileyo kulula ukuzinyamekela kwaye ziya kuhlala iminyaka.
Endaweni yokupholisha ilitye kubengezela obuphezulu okanye ulishiye lingakhange likhazimliswe kwaye lijongeka ngathi luthuli, inyengane exhonxiweyo inika abathengi indlela ephakathi.
Ikhazimla ngakumbi kunegranite ehloniphekileyo, kodwa ayibonisi njengokukhanya imiphezulu yeetafile lenyengane , Ukwenza ulusu kuvelisa ubume obunomdla obusajongeka bungcono kuyilo lwangaphakathi.
Yintoni iGreat Granite
Iinkcenkceshe zokuLungisa iGranite kunye neengozi zayo
Iindidi zeeTafile zeGranite eziNqabileyo
I-antique ebomvu e-Brown ehlanganiswe
I-Pearl emnyama enebhola yeGranite
Ihlathi leMnyama eliLuhlaza leGranite
Intsimbi Grey Granite
I-Leather vs i-Granite eKhazimlisiweyo
I-Honed vs iLe Granite eQokelelweyo
Uyicoca njani iGranite eLeather
Emva kokuba igranite ikhonjiwe yaza yasikwa kwisilayiti, iijets zamanzi, iinkqubo zeekhemikhali, iibrashi zentloko yedayimane, kunye namavili okusila anokusetyenziselwa ukwenza iintlobo ezahlukeneyo zokugqitywa kweli litye.
Imiphezulu yeetafile yegranite ekhazimlisiweyo kudala ithandwa ngenxa yokubonakala kwayo okuhle kunye nokuqaqamba. Inkqubo yokupholisa ithathelwe amandla ayo okuvelisa imibala etyebileyo yeli litye lendalo.
Olunye uhlobo lwesiko lenyengane ecoliweyo kukuhombisa igranite. Inkqubo yokuhlonipha iyafana nenkqubo yokucoca, thabatha inyathelo lokugqibela. Ngelixa igranite yokuhombisa ingenzi lukhulu ekugxininiseni umbala welitye, ivelisa ubume obunomdla obulungele iikhitshi ezisesikweni.
Umkhwa omtsha kwiitafile zasekhitshini, ukwenza isikhumba yinkqubo yokugqiba enokusetyenziswa kwigranite eyomileyo. Iibhulashi ezinamakhonkco zedayimane zilipholisha kancinci ilitye ngelixa lisusa ukungafezeki, lishiya ngasemva umhlaba oqaqambileyo ocela ukuchukunyiswa.
Imibala ityebile kune-granite ebekekileyo, kodwa i-granite ene-leather ayinalo ilitha elibonakalayo lenyengane ecoliweyo.
Abaxhasi begranite egalelweyo bayayityhila imilo yendalo kunye nelitye. Ayizizo zonke iizilebhu zegranite ezilethweyo eziya kubonakala ngokufanayo. Iimpawu ziyahluka ukusuka kubunzulu ukuya kubunzulu, ukunika abaninimzi elinye ithuba lokwenza ngokwezifiso.
Imiphezulu yeetafile enezinto ezizikhethelayo lukhetho olukhulu ngezizathu ezahlukeneyo. Bayenyuka ngokuthandwa, ngoko musani ukumangaliswa ukuba abahlobo bakho zange beva ngegranite enezinto.
Ukuba uthanda ukuba phambili komkhwa xa kufikwa kuyilo lwasekhaya, awunakuhamba gwenxa ngokugqitywa kwesikhumba. Abayi kuphuma kwisitayile nanini na, ke ukhetho olufanelekileyo lokuhlaziya okanye ukwenza kwakhona i-countertop yakho.
Njengayo yonke inyengane, inyengane egalelweyo yomelele kakhulu, kunye nokukrwela kunye nokutshisa okunganyangekiyo. Umgangatho obunjiweyo uqheleke ngakumbi kwaye uyangeneka kunegranite ebengezelwe kakhulu, kodwa ubunzulu kwaye utyebile ngombala kunegranite ebunjiweyo.
Nayiphi na imiphezulu yeetafile lenyengane kuya kufuneka ukuba ngamaxesha kwakhona. Imiphezulu yeetafile enezikhumba ifuna ukuthengiswa rhoqo ngakumbi kunegranite ebunjiweyo. Cwangcisa ukugqibezela kube kanye ngonyaka, ngakumbi ukuba i-countertop yakho ixhomekeke ekusebenziseni kakhulu okanye emanzini amaninzi. Ishedyuli yokuthengisa iyafana naleyo yegranite ehloniphekileyo.
Igranite yokuthambisa ityhila imibala enzulu kunye emnyama yelitye elihle lendalo. Ukuba ufuna ukubonisa i-countertop yakho ngaphandle kokuyipolisha kwi-gloss ephezulu, isikhumba sisisombululo sendalo.
Igranite edibeneyo inokuthi inganyangeki kakhulu kwiibhaktheriya kunee-slabs ezibunjiweyo okanye ezipholileyo. Inkqubo yolusu iqinisa pores zendalo zegranite, iyenza ukuba kungabikho lula ukugcina ii-microbes.
I-Granite ilitye lendalo elininzi elifumaneka kwiindawo ezininzi kwihlabathi liphela. Amatye angenisiweyo ngokubanzi ayabiza kakhulu kunamatye asekhaya ngenxa yeendleko zokuhamba ezongezelelweyo.
Inketho yexabiso lenyengane ebiza ixabiso eliphantsi inokuba yeyona ikroliweyo kufutshane nendawo yomsebenzi. Kubandakanya ukufakela, lindela ukuhlawula phakathi kwe- $ 50 kunye ne-200 yeenyawo zenyawo ngesikwere se-granite.
Ukugqitywa okusetyenzisiweyo kwi-granite kuchaphazela indlela exabiso ngayo. Igranite ebengezelelweyo yeyona ixhaphakileyo, iyaziwa, kwaye ukhetho olugqityiweyo olukhoyo luyafumaneka. Ikwanalo nexabiso eliphantsi. Igranite ehloniphekileyo ifuna abasebenzi abancinci ukuvelisa, kodwa iyabiza kakhulu ngenxa yemfuno esezantsi.
Igranite enesikhumba yeyona nkqubo ibiza kakhulu yokugqibezela konke konke. Njengoko isiba sithandwa ngakumbi kwaye siqhelekile, ungalindela ukuba ixabiso lihle, kodwa okwangoku abathengisi beendlela bahlawula ipremiyamu.
Ubungakanani obuqhelekileyo betafile yekhitshi zii-30 zenyawo zenyawo. Ekhitshini lobu bukhulu, kuya kufuneka ulindele ukuhlawula phakathi kwe- $ 4,500 kunye ne- $ 6,000 yee-countertops ze-granite ezifakwe ngokufanelekileyo.
Azikho iitafile zegranite ezimbini ezixutywe ziya kujongeka ngokufanayo. Umahluko kwilitye luxhomekeke kumxholo wezimbiwa, indawo ekwakukrolwe kuyo, kunye nobunzulu besikhumba.
nini ukuthumela izimemo zomtshato
I-granite enezinto ezinzulu ezinemingxunya ebonakalayo kunye ne-dimples. Ukuthamba okungaphantsi kuya kuphinda umphezulu, kodwa unokwazi ukubona umahluko kubume bezandla ngezandla zakho.
Ubunzulu bolusu luxhomekeke kwindlela iincam zeebhanti ezenziwe ngedayimani ezazisetyenziswa ngayo phezu kwelitye. Ngokuqhelekileyo ungabuchaza ubunzulu besikhumba xa usenza iodolo yetafile yakho kumthengisi.
Ezinye iintlobo zegranite zibukeka ngcono ngokugqitywa kokuxhamla kunezinye iintlobo. Ezimbalwa zeentlobo ezaziwa kakhulu zegranite enehlathi elimnyama, iAntique Brown, kunye neGrey yentsimbi. Ungabona ezinye iintlobo ze imiphezulu yeetafile zegranite emhlophe kweli phepha.
Eyahlukileyo imibala lenyengane kunye neempawu zala matye zenza umphumo omangalisayo oya kwenza i-countertop yakho ibe yindawo ephambili kuyo nayiphi na indawo.
Ngelixa umbala omnyama nengwevu yeyona mibala ixhaphakileyo ebonwe kwigranite, ubusazi ukuba nayo iza ngombala omdaka? Ngokuchanekileyo, ngumbala omnyama-mnyama.
Ukugqiba i-Antique Brown i-granite kunye neebhondi zebranti kuvelisa umbala ocebileyo we-mahogany. Iziphumo zikhumbuza izitulo ezimnandi zesikhumba eziye zaphuka kwiminyaka yokusetyenziswa-ziyathuthuzela, zintle kwaye ziyachukumiseka.
Iperile emnyama emnyama enetyhefu lilitye elixineneyo elivela ikakhulu eIndiya ngombala omnyama ongaguqukiyo. Inokufunyanwa ngeempawu ezahlukeneyo zesilivere, igolide, kunye nebrawuni ezenza ukubonakala okufanayo.
Kuba ijiye kakhulu ayifuni ukutywinwa. Eli litye lihlala lithengiswa kumabakala amabini ahlukeneyo elinye liyatyeba kunelinye. Bona enye Iindidi zemiphezulu yeetafile zegranite ezimnyama Apha.
Eli litye limnyama lafunyanwa eIndiya. Umbala oqaqambileyo yi-obsidian entle, egqobhoza ngombala omhlophe ocacileyo.
Xa kugqitywa ukugqitywa kwesikhumba, imilo yendalo yelitye iyatyhilwa. Uphando ngesincedisi sombala welitye ukuze ufumane eyona mpembelelo imangalisayo.
Olu hlobo lwegranite luxinene ngokukodwa kwaye alunamsebenzi, kwaye aludingi kutywinwa. I-Black galaxy granite ine-texture encinci ngakumbi kunezinye iintlobo zegranite. Kuzo zonke iindidi zemiphezulu yeetafile zegranite ezixutywe, le iya kuba yeyona isondeleyo kwinkangeleko yesikhumba.
Nge-veining encinci, eli litye linokukhanya okukhanyayo kunye nokumnyama esele kukhumbuza isikhumba esidlakadlaka. Imibala eyahlukeneyo engwevu iboleka umoya ozolileyo, opholileyo kwigumbi. Ubume bentsimbi engwevu yegreyite ithande ukuba nzulu kunezinye iintlobo zegranite.
I-granite ephosiweyo iye yaxutywa yaya kwisheen ephezulu. Inobuso obumenyezelayo, obubonakalisayo obuboleka ukubonakala okungamanzi kweli litye lomeleleyo. Igranite ekhazimlisiweyo inzulu kwithoni kwaye imnyama ngombala kunegranite engakhange ipolishwe.
I-slab e-granite ephosiweyo yeyona incinci ifunxa naluphi na uhlobo lweplanethi yegranite. Yeyona ilula ukuyicoca kwaye iya kufuna ukutywinwa rhoqo. Igranite edibeneyo ifuna umgudu ongakumbi xa ucoca ukuze uqiniseke ukuba iidivots zihlala zingacacanga.
Inkqubo yolusu ivula ii-pores ezininzi elityeni, ke igranite edibeneyo iyabamba kwaye iya kufuna ukutywinwa rhoqo.
I-granite ehloniphekileyo isuswe kumgca wendibano ngaphambi kokufikelela esiphelweni senkqubo yokucoca. Ingumphezulu nje ogudileyo njengegranite ecoliweyo.
Endaweni yokubonakalisa ukukhanya, i-granite ehloniphekileyo iyayithatha. Amacwecwe agqityiweyo ngokuhombisa ngokubanzi akhanya ngombala kunee-slabs ezivela kwikwari efanayo ezigqityiweyo ngokupolishwa. I-granite ehloniphekileyo ithambekele ekuboniseni iminwe, igrisi kunye nothuli ngokulula kunegranite ebunjiweyo.
Ukwenza igranite edibeneyo, abavelisi baqala nge-slab esele ihonjisiwe. Emva koko, iibrashi ezinamakhonkco edayimane zisetyenziselwa ukwenza indawo ethe tyaba.
Iibristles zebrashi zenza iincindi ezincinci kwigranite, ezinegalelo ekubonakaleni kwayo. Igranite enamacwecwe amenyezelayo kunegranite, kodwa ayibonisi njengegranite.
Ukugqitywa kwesikhumba kunokusetyenziswa kwi-granite yawo nawuphi na umbala, kodwa kuhlala kuyeyona nto ibalulekileyo xa kusetyenziswe ilitye lombala omnyama.
Ipolite lenyengane ivala pores ilitye. Xa itywiniwe, iyamelana kakhulu nokuchitheka kunye nokutshiza. I-granite eqholiweyo ayinalo ukhuselo olufanayo, nangona inkqubo iqinisile pores yendalo yelitye.
Sula ukuchitheka ngokukhawuleza ukunqanda ukubola. Gcina iiasidi njengejusi yesitrasi ekudibaniseni imiphezulu yeetafile; banokudala amabala. Umphezulu wombala wegranite edibeneyo uxola kakhulu xa kufikwa kumanqatha, kwiminwe, nakwiimvuthuluka, kwaye ayifuneki kangako kunegranite ebunjiweyo.
Ungaze usebenzise isicoci esineasidi kwizitafile zakho zegranite, nokuba ufakele hlobo luni na. Iviniga, iblitshi, ezo zinto zokucoca ziluncedo ziluhlaza ziorenji- zonke ezi zinto zingaphandle ziphumile. Endaweni yoko, sebenzisa isepha namanzi ukucoca yonke imihla.
Ukususa amabala asekwe kwioyile, yenza uncamathiso kwi-baking soda kunye namanzi. Ukutshintsha i-hydrogen peroxide emanzini ukuba ibala lisekwe emanzini. Xa ibala ligutyungelwe kukuncamathisela, lisigubungele kwaye lihlale iiyure ezimbalwa. Sula intlama usebenzisa ilaphu elimanzi.
Ukuba i-granite edibeneyo kufuneka ichithe, ifuthe, okanye ibala ngokusisigxina, kusenokwenzeka ukuba wonke umhlaba uya kufuna ukucokiswa. Kunzima kakhulu ukutshatisa ukwakheka ngaphandle kokuphinda ubonakalise yonke i-slab.
Ukuvavanya ukuba i-countertop yakho ye-granite edibeneyo ifuna ukuphinda ifakwe kwakhona, thontsisa amanzi kwindawo engabonakaliyo. Cwangcisa isibambi xesha semizuzu elishumi.
acoustic iingoma zomtshato zokuhamba ezantsi
Xa ixesha liphelile, ukuba amanzi ahleli phezu komphezulu wecomputer yakho, itywina lisasebenza. Ukuba amanzi atshintshiwe ngokuyinxenye okanye agcwele ngokupheleleyo, lixesha lokuba uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde ubekhona.
Imiphezulu yeetafile enezinto ezintle, zintle, kwaye kulula ukuzigcina. Le ndlela intsha yokugqitywa kwegranite lukhetho oluhle kakhulu kubathengi abaphantsi kwekhonkrithi ebekekileyo kwaye abafuni kukhanya okuphezulu kwekhonkrithi ecoliweyo.
Funda ngakumbi malunga indlela yokucoca imiphezulu yeetafile lenyengane kweli phepha.
ngowuphi umnwe wokunxiba umsesane wokuzibandakanya
Ezona ntetho zibalaseleyo zabazalwana
Kuthetha ukuthini ukutshabalalisa umtshato?
I-avareji yeendleko ngomtshato womntu ngamnye
Imitshato ehamba phambili yokufika e-usa